Adore Cricket Trent Bridge - Isikhokelo emhlabeni Test
1 Trent Bridge - A guide emhlabeni Test
ipapashwe 1st EyeDwarha 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Izikhokelo Ground.
Xa lelokuqala kuthotho "zizikhokelo eziza kwimihlaba" thina ziyavela Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale
Ukuqalisa kunye, apha umfanekiso womhlaba, oriented eyiyo ikhampasi, kunye kwiziganga enombhalo
Radcliffe Road Yimani (ngokusesikweni Trent Bridge Cricket Centre)
I Radcliffe stand lendlela enkulu, 3 Tiered ukuma, ibhokisi ehlaziya kweli ziko. Kutyelelo lwethu lokugqibela Trent Bridge Sahlala Radcliffe stand wendlela kunye nendlela yethu izihlalo zethu wadibana Sir Ian Botham kunye Michael Vaughan. Le mbono ovela kumalungu aphezulu ame ifana kakhulu nembono on TV (isiqingatha eova ubuncinane). Ukuma kwakhona ejongene uMzantsi ukuze abambe eninzi kwelanga. i Upper 2 kwakubalulekile abakhuselekanga iziqalelo ngaphandle inshorensi, ngeli nqanaba aphantsi kakhulu kuzo le amanqanaba aphezulu, nangona abakumqolo ongaphambili kusenokwenzeka ukuba ukubamba nayiphi na imvula ena. Njengoko ubona kulo mfanekiso, ukuba uhleli kwicala lasentshona kwelona nqanaba liphezulu kunokwenzeka ukuba ufumane umthunzi kamva emva kwemini. Umgangatho ophakathi unokuphakama okungenani kwe-10m kunye nenqanaba eliphezulu ukuphakama okungenani kwe-14m. Kunye nokuma kweNdlela yeHound iRadcliffe Road stand yindawo apho kukho khona amatikiti aphezulu.
William Clarke Yimani
I-William Clarke Ukunamathela utywala ezamahala ukuma ngabaphi na awayecinga ukuba "usapho kuma". amatikiti izaphulelo for amaqela osapho, phantsi 21s kunye juniors ngokufuthi zifumaneka kuphela kule yokuma.
Parr Yimani & West Wing Yimani (Ke kaloku indawo yi "Yima Entsha")
Kutshanje uphuculo yakutshanje ukuya Trent Bridge lwagqitywa, nge "Yima Entsha" Ukubuyisela i Parr kunye West Wing Liyema. Lo mfanekiso ngaphezu nangoku ibonisa neenqwelwana endala njengoko google-umhlaba imifanekiso waphunyezwa nokuphuculwa emhlabeni. Ukuma New ine uphahla enomva phezulu nelinika indawo ngasemva 1/3 ezihlalo. lo phambi 2/3 ezihlalo bahlala basesichengeni imvula kunjalo. Ukuma lijongene North-East kunye nophahla enhle ke umthunzi kakuhle. Ngaphandle izaphulelo usapho kwi William Clarke kuma kwi Yima New (kunye stand Fox Road) Ngokwesiqhelo amatikiti anexabiso eliphantsi.
AmaLungu Pavillion (kunye Larwood and Voce Isiza) ifumaneka kuphela ukuya kumalungu CCC Nottinghamshire. iindleko Ubulungu emhlabeni £ 150 (malunga ne- $ 100 yabadala).
Sukele Road Yimani
Kunye Radcliffe Road kuma ukuma ukuzingela Road uqobo apho indawo amatikiti ephezulu amaxabiso. Ibe 2 amanqanaba, kunye senani elingaphezulu ukuba ubume ubuncinane 6m.
Larwood & item Stand
I Larwood and Voce Isiza (kunye ne Pavillion) ifumaneka kuphela ukuya kumalungu CCC Nottinghamshire. iindleko Ubulungu emhlabeni £ 150 (malunga ne- $ 100 yabadala).
Fox Road Yimani
Ngaphandle izaphulelo usapho kwi William Clarke imi Fox Road eme (kunye Stand Entsha) ngokuqhelekileyo kufuneka amatikiti ibiza kancinane. I-Fox Road stand nayo ukuma apho ngokuqhelekileyo iphatha Barmy Army, kunye nomoya ococekileyo.
Trent Bridge nje ikhilomitha 1.0 ukusuka kwisikhululo Rail iphambili e Nottingham. Ungakhankanya noba uhambe apho kuthatha malunga nemizuzu engama-20, uthabathe ibhasi (umzk. #11) endiwazuze £ 1,70 abantu abadala kunye £ 1 abantwana, okanye iteksi ngeenxa £ 5.
Nottingham lisetyenzelwa kakuhle yi-M1 evela bobabini North noMzantsi. Kanye abaqhubi isixeko ukusebenzisa le EventLink Park kunye Ride nkonzo zibonelelwa ngoorhulumente beedolophu Nottingham Derby. Kuba Test elidlulileyo le nkonzo uye wabaleka ukusuka Queen kaThixo Drive Park & site Ride neendleko £ 4 emotweni ukuya 4 abantu. Le nkonzo iyabaleka ngaphandle Sandicliffe Ford kwi Loughborough Road leyo 100m zomhlaba. Nottinghamshire CCC ukunikeza up ‑ ukuza kuthi ga ngoku ngolwazi ukuba iziganeko ezithile kwisayithi yazo. Ukusuka emantla athathe M1 kuhlangana 26 uze ulandele le A610, A6514 no A52 ezingama-6.1 weekhilomitha. Ukususela kumzantsi athathe M1 kuhlangana 24 uze ulandele A453 kunye A52 kangangeekhilomitha 9.1.
Njengezininzi ezinye zinkundla zemidlalo azivumelekanga ukuba uthathe iibhotile okanye iinkonkxa emhlabeni, kuquka iziselo ezibandayo kunye namanzi. Iziselo ziyafumaneka emhlabeni, zidluliselwe ukusuka emhlabeni £ 3,50 - £ 4,00 ethululwayo nganye iziselo ezinxilisayo. Iindaba ezimnandi kukuba unako ukuthatha ukutya kwakho emhlabeni.
Akukho Posts Kodwa!
14th EtiMnga 2015
Ayikwazi ukulinda u-2016